Political Page ပုလဲသွယ်: Deport illegal immigrants တရားမဝင် ဝင်လာသူတွေကို ပြန်ပို့လိုက်
Deport illegal immigrants တရားမဝင် ဝင်လာသူတွေကို ပြန်ပို့လိုက်
“တရားမဝင် ဝင်လာသူတွေကို ပြန်ပို့လိုက် - တရားသူကြီးမှ အစိုးရကိုပြော” ဆိုတဲ့ သတင်းတပုဒ် ၅-၄-၂ဝ၁၃ နေ့ထုတ် Times of India သတင်းစာမှာ ပါလာတယ်။
ဒီသတင်းအရ “တရားမဝင် ဝင်လာနေသူတွေဟာ အပေါ်ကနေယူစားနေတဲ့ (ပါရာဆိုက်) တွေလိုဖြစ်တယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကို သွန်းထုတ်ပြစ်ယူနေကြတယ်” လို့ ဆိုပါသေးတယ်။ တရားသူကြီးကနေ ဒေလီအစိုးရကို တရားမဝင် ဝင်လာနေသူတွေကို ဖေါ်ထုတ်ဘို့နဲ့ သူတို့ကို သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကို ပြန်ပို့တာကိုလည်း သေချာစေပါလို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒီတရားစီရင်ရေးဟာ ဒေလီအစိုးရအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ တိတိကျကျပြောရရင် ဒေလီအစိုးရဆိုတာ မြို့တော်နယ်မြေအစိုးရဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမျိုးထက် နယ်မြေကျဉ်းပါတယ်။ နေပြည်တော်လိုမျိုးမှာသာ ဥပဒေသက်ရောက်တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
သေးတယ်ဆိုပေမဲ့ အရေးပါတဲ့ တရားစီရင်ရေးကို လုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာ ထောက်ပြလိုပါတယ်။ နောက်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးနဲ့ တရားစီရင်ရေးဆိုတဲ့ မဏ္ဍိုင်ကြီး (၃) ရပ်ကို သီးခြားစီ၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်တည်ရှိပြီး အပြန်အလှန် ထောက်ကူထိန်းမတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အချက်ကလည်း အလွန်တရာအရေးကြီးပါတယ်။ ရိုးစင်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးအခြေခံ အချက်တခုသာဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယမှာ အဲလို တရားစီရင်ရေးကနေ အစိုးရကို စေခိုင်းတာရဲ့ပင်ရင်းအကြောင်းတရားဟာ ဘင်္ဂလားဒက်နိုင်ငံကနေ တရားမဝင် ဝင်လာနေသူတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာနေထိုင်နေသူတွေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒက်မှာနေထိုင်နေသူတွေဟာ တကယ်တန်းဆိုရင် သွေး၊ ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတရားတွေမှာ တကယ်ကို ရောနှောဆက်စပ်နေကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုပ်နဲ့မြန်မာတွေလို အတင်းဆွေးမျိုးစပ်ပြီး ပေါက်ဖေါ်လို့ အော်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါ။
Smriti Singh, TNN | Apr 5, 2013, 02.46 AM IST
NEW DELHI: Calling illegal migrants "parasites" that drain the country's economy,atrial court has directed Delhi government to identify and deport all foreigners living illegally in the capital. "The chief secretary is asked to identify the foreigners living in Delhi illegally and ensure that they are sent back to their respective countries as early as possible," additional sessions judge Rajender Kumar Shastri said while asking foraquarterly report from the government "till the last identified illegal migrant is expelled".
The court's directions came while sentencing four Bangladeshi nationals — all illegal migrants — to 13 years in jail for carrying out robbery in south Delhi. Taking serious note of the offence, the court said that such illegal migrants are responsible for draining "already dwindling natural resources of the country". "If the illegal migrants from neighbouring countries are counted together, they may formapopulation equal toacountry of moderate size...They deprive local residents from their meager incomes by pumping in cheap labour," he said.
Even as the convicts showed their election I-cards to prove they were Indian citizens, the court rejected it saying the election I-card is notaproof of citizenship. The court also directed thatacopy of the order be sent to chief secretary, Union of India, "who may proceed to frameaNational Policy on how we can tackle... illegal migration from neighbouring countries".
On the issue of whether the court has the power to give such directions to the government as the Indian law thrives on separation of power, judge Shastri said, "While deciding case in hands, the accused are found foreigners, illegally residing in India. In these circumstances, mejudice, if this court directs deportation of these guilty foreigners along with other aliens, same will not amount to poking its nose in other's affairs."
Posted by Dr. Tint Swe at 9:50 PM